एउटा सर्वेक्षण अनुसार धेरै नङ टोक्ने मानिसहरुलाई धेरै तनाव हुन्छ । नङ टोक्ने बानी, गर्छ गम्भीर हानि - ज्ञानविज्ञान
नङ टोक्नाले नङ वरपरका छालाको कोशिकाहरुलाई पनि हानी पुग्छ । यस्तो अवस्थामा पेरोनिसियाबाट पीडित हुने पनि खतरा हुन्छ । यो एउटा स्किन इन्फेक्सन हो, जुन नङको वरपरको छालामा हुन्छ ।
नङ पालिस लगाउदा निम्तिन सक्छन् यस्ता समस्याहरु
Don't Miss it केटाकेटीहरु कुलतमा फसे, कसको गल्ती ? र, उनीहरुलाई कुलतबाट कसरी टाढा राख्ने ? महत्वपूर्ण जानकारी
Up Next पखला लाग्दा के गर्ने ? घरेलु उपाय जानिराखाै